Febrile Seizure (အဖျားကြီးပြီးတက်ခြင်း) : ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကုသမှုတွေအကြောင်း Hello Sayarwon
Febrile Seizure (အဖျားကြီးပြီးတက်ခြင်း)
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. K Zin Thwe | ရေးသားသူ Phyo Wai Yan
Febrile Seizure (အဖျားကြီးပြီးတက်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ကလေးတစ်ယောက်ဟာ နေမကောင်းတဲ့အချိန်တွင် ကိုယ်အပူချိန်များပြီး ‘တက်’ တတ်ပါတယ်။ ဒီလို ‘တက်’ တာဟာ မိဘတွေနဲ့ ကလေးကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေကို သတိထားမိစေနိုင်တယ်။
Febrile Seizure (အဖျားကြီးပြီးတက်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက် ၁နှစ်မတိုင်မီမှာ အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် အဖျားကြီးပြီးတက်ဖူးတဲ့ ကလေးတွေမှာ ပိုအဖြစ်များတယ်။ တချို့ကလေးတွေမှာ တစ်ခါမက တက်ဖူးကြတယ်။ အသက် ၁နှစ်နှင့်အထက် ကလေး ၄ယောက်အနက် ၁ယောက်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် အဖျားကြီးပြီးတက်တတ်တာကိုလည်း တွေ့ရတယ်။
Febrile Seizure (အဖျားကြီးပြီးတက်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အကယ်၍ ကလေးရဲ့ မိဘ၊ ညီအစ်ကို မောင်နှမနှင့် ဆွေမျိုးနီးစပ်တွေမှာ အဖျားကြီးပြီးတက်ခဲ့ဖူးသူရှိလျှင် ကလေးမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ခြေများတယ်။ အဖျားကြီးပြီးတက်တာဟာ တစ်ခါတစ်လေ ရုတ်တရတ်ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်။ ကျန်းမာတယ်လို့ထင်ရတဲ့ကလေးတွေမှာ အတက်ရောဂါအရင်ဖြစ်ပြီးမှ မိသားစုက ကလေးနေမကောင်းတာကို သတိထားမိတတ်ကြတယ်။
Febrile Seizure (အဖျားကြီးပြီးတက်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ယခုအခါ အဖျားကြီးပြီးတက်တဲ့ မိသားစုတချု့ိရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇတွေကို စမ်းသပ်ပြီး အဖျားကြီးပြီးတက်စေတဲ့ အကြောင်းတွေကို သုတေသနပြုလုပ်နေပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကိုလေ့လာခြင်းဖြင့် အဖျားကြီးပြီးတက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကို သိရုံသာမက ကာကွယ်နည်းတွေကိုပါ သိရှိစေနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Febrile Seizure (အဖျားကြီးပြီးတက်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
• အဖျားကြီးပြီးမတက်ခင် ပုံမှန်မဟုတ်သော ဖွံ့ဖြိုးမှု
• အဖျားကြီးပြီးတက်ခြင်းအပြင် တခြားအကြောင်းရင်းများရှိနေခြင်း (complex febrile seizure)၊ တက်တာက ၁၅မိနစ်ထက်ကြာမယ်၊ ၂၄နာရီအတွင်း တစ်ခေါက်ထက်ပိုပြီးတက်မယ်။ တက်တဲ့အခါမှာ လည်း ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခြမ်းပဲ တက်မယ်။
• မိဘ၊ ညီအစ်ကို ၊မောင်နှမထဲတွင် မဖျားဘဲတက်တဲ့ အတက်ရောဂါခံစားနေရသူတွေရှိလျှင်
Febrile Seizure (အဖျားကြီးပြီးတက်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
• တက်နေစဉ်တွင် ကလေးကိုစိတ်ချရတဲ့ ပြင်ညီမျက်နှာပြင် အနိမ့်ပေါ်တွင်ထားပြီး သေချာစောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ အချိန်ကိုမှတ်ထားပြီး ၅မိနစ်ကျော်ပါက ကလေးကို အရေးပေါ်ဆေးကုသဌာနသို့ ပို့ဆောင်တာက ပိုစိတ်ချရပါလိမ့်မယ်။
• ကလေးကို ရေနွေးနဲ့ ရေချိုးပေးတာက အဖျားကြီးပြီးတက်တာကို မကာကွယ်နိုင်ပါဘူး။ ကလေးရဲ့ခေါင်းနှင့် ကိုယ်ကို ရေအေးဝတ်ကပ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပူကျဆေး(ပါရာစီတမော၊Ibuprofenc) တိုက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက ကလေးကို ကိုယ်ပူနေရာမှ ပြန်ကောင်းလာနိုင်စေပေမယ့် အဖျားကြီးပြီး မတက်အောင်တော့ မကာကွယ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
• အဖျားကြီးပြီးတက်တတ်တဲ့ကလေးအများစုဟာ အတက်ကျဆေးတွေ နေ့တိုင်းတိုက်ဖို့မလိုပါဘူး။ အဖျားကြီးပြီးတက်တာ ခဏခဏဖြစ်တဲ့ ကလေးတွေကိုတော့ အတက်ကျဆေး ( Phenobarbital ၊ valproate) တို့လို ဆေးမျိုးတွေကို တိုက်ပြီး ထပ်မတက်အောင် ကာကွယ်လို့ရပါတယ်။
• ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ အဖျားကြီးပြီးတက်တာ ကြာတတ်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ ဆေးဝါးကုသမှု အလွယ်တကူမရနိုင်တဲ့ ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသတွေမှာနေတဲ့ ကလေးတွေကို အတက်ကျဆေးတိုက်ရန် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
• အဖျားကြီးပြီးတက်တာကြာတဲ့ကလေးတွေ (သို့) ခဏခဏတက်တတ်တဲ့ကလေးတွေကို (phenobarbital)အတက်ကျဆေးသုံးတာ ရှားပါတယ်။
• အဖျားကြီးပြီးတက်နေစဉ်တွင် သုံးနိုင်သောဆေးများမှာ
o ဒိုင်ယာဇီပန်(Diastat) ဂျယ် သို့မဟုတ် အရည်ကို စအိုအတွင်း ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
o ကလိုနာဇီပန်(Klonopin) အပြားသို့ ဒိုင်ယာဇီပန်ဆေးပြားကို လျှာအောက်သို့ထည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လော်ရာဇီပန်(lorazepam) ဆေးလုံးကို ချေ ပြီး ပါးစောင်နှင့် သွားဖုံးပေါ်ကို ထည့်ပေးလည်းရပါတယ်။
ကိုယ်ပူနေတဲ့ကလေးကို ဒိုင်ယာဇီပန်ပေးတာက အဖျားကြီးပြီးတက်တာကို လျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ Valium(အတက်ကျဆေး)သောက်တဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ၃၀ရာခိုင်နှုန်းမှာ ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်တဲ့ အိပ်ငိုက်ခြင်း၊ ဂျီကျခြင်း နှင့် အသိစိတ်ကပ်မှုအားနည်းခြင်းတို့ဟာ ရက်အတော်ကြာတဲ့အထိဖြစ်နေတတ်တယ်။
အရင်က အဖျားကြီးပြီးတက်တဲ့ကလေးတွေကို အတက်ကျဆေးပေးတာက နောက်ပိုင်းတွင်အတက်ရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ ဆရာဝန်တွေက ယူဆခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အဖျားကြီးပြီးတက်တဲ့ကလေးအများစုက အတက်ရောဂါမဖြစ်ကြပါဘူး။
အတက်ကျဆေးကို ကြာရှည်သုံးစွဲပါက ကလေးတွေရဲ့ ဦးနှောက်ကိုထိခိုက်စေပြီး တခြားထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဖျားကြီးပြီးတက်တဲ့ကလေးတိုင်းကို အတက်ကျဆေးနေ့တိုင်းတိုက်ဖို့ မလိုအပ်ပါဘူး။
Hello Health Group သည်ဆေးပညာအကြံပေးခြင်း၊ ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်ကုသပေးခြင်းများမပြုလုပ်ပေးပါ။
ဝမ်းလျှောနေတဲ့ လူနာများအတွက် BRAT diet က တကယ်ကောင်းတာလား။
BRAT diet က ဝမ်းလျှောနေတဲ့ လူနာတွေအတွက် တကယ်ပဲ သင့်တော်ရဲ့လား။ အစာခြေစနစ်ကို အနားပေးတဲ့အတွက် စားသင့်လား။ ၄မျိုးတည်းပါလို့ အာဟာရပြည့်ပါ့မလား။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, ထူးခြားသည့်စားသောက်မှုပုံစံကွဲများ စက်တင်ဘာ 20, 2021 .2mins read
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မှာ ခဏခဏ မေ့တတ်တာ ဘာကြောင့်လဲ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှတ်ဉာဏ်ကျဆင်းသွားတပြီး ခဏခဏ မေ့တတ်နေယ်လို့ ခံစားမိပါသလား။ ဒီလိုဖြစ်တာ မေမေတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကာလကျန်းမာရေးပြဿနာများ, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ကျန်းမာရေး စက်တင်ဘာ 20, 2021 .2mins read
ဆံပင်စိုလို့ ဖျားတာလား......... ဒါက တော်တော်လေး ကြားခဲ့ဖူးမယ့် စကားပါ။ တကယ်ကတော့ ဆံပင်စိုလို့ ဖျားတာက တကယ်ရော ဟုတ်ရဲ့လား....
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျန်းမာရေး, အအေးမိဖျားနာခြင်း စက်တင်ဘာ 20, 2021 .2mins read
သေကြောင်းကြံစည်တာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အထင်မှားနေကြတဲ့ အချက်အချို့
သေကြောင်းကြံစည်တာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အထင်မှားနေကြတဲ့ အချက်အချို့က ဘာတွေများ ဖြစ်မလဲ...... ဆောင်းပါးလေးထဲ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ
စိတ်ကျန်းမာရေး, မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း စက်တင်ဘာ 20, 2021 .2mins read
ကိုဗစ် အပြီးမှာ ပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းမှုဒဏ်တွေကို ဆက်ပြီး ခံစားရမှာလား။
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 21, 2021 .3mins read
ကလေးမွေးပြီးရော ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက် နိုင်သေးလား
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးကို ဘယ်သူတွေ ထိုးလို့ ဘယ်သူတွေ မထိုးသင့်ဘူးလဲ………